AutoSEO na FullSEO, Kedu Semalt SEO Ọrụ Kachasị Mma?
N'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla anụla banyere SEO. Otutu n’ime ụnụ matara ihe ọ pụtara na otu o si arụ ọrụ. Gbanyụọ isi gị, ị gaghị echebara ịkọwa etu o si dị egwu na ịnya ụgbọ ala ma mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị nọrọ. Agbanyeghị, anyị nwere isiokwu zuru oke maka gị ma ọ bụrụ na ị maghị SEOs. Jiri nwayọ pịa ebe a ma nwee ọsọ ọsọ na-adọrọ mmasị na ihe SEOs pụtara na otu ha nwere ike isi nyere azụmahịa gị aka ito.
Mana ọtụtụ oge ozugbo m jụrụ ụdị SEO kachasị amasị gị ka ọ bụrụ AutoSEO ma ọ bụ FullSEO ka m ga-enweta ụdị a. Otu, nwatakiri, na-enye mgbe ị jụrụ ha mgbako ha na-aghọtaghị. Ọ dị mma, anyị abụghị ụmụaka, anyị ji n'aka ma ọ bụrụ na ị dabere, ị ga-amụta ọtụtụ ihe banyere SEO. Na njedebe, ị ga-ekpebi ihe ụdị SEO kachasị amasị gị.
Dị ka ị maara, SEO bụ otu n'ime ụzọ dị ọnụ ala iji mee ka weebụ gị mara. Ma n’ihi na a na-achọ ha nke ukwuu, ndị na-ege gị ntị nwere ike ịnweta njikọ ozugbo mgbe ha gara na saịtị gị.
Ya mere, ajụjụ nde dollar na-anọgide ụdị SEO kacha mma FullSEO ma ọ bụ AutoSEO?
You ga - ahọrọ FullSEO ma ọ bụ AutoSEO?
Maka ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na ndị ọrụ ịntanetị, ha enweghị nkọwa ọ bụla na nke a na-egosi. Ma ọ bụghị ihe ọtụtụ ndị na-enye nsogbu ịmara. Ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ kwenyere na SEO. Ha achọghị ka ihe niile dị omimi kọwaa. Agbanyeghị, anyị na-achọpụta ozi a dị mkpa, karịchaa mgbe ụfọdụ ndị dịka ị na-anwa ịghọta ya.
Nghọta SEO bara uru nke ukwuu. N’ụzọ a, ị ga-ahazi mmefu ego gị nke ọma ka ị na-ebuli ohere gị nke ịga nke ọma.
Site na puku puku ngwanrọ na ngwanrọ SEO dị ka Semalt, ụwa ahịa dijitalụ abụrụla nke nwere isi. A na - ejide ndị nwe weebụsaịtị ugbu a n'etiti onye ịhọrọ ma ọ bụ ọrụ kachasị mma. Ndị ahịa SEO na-adaba n’etiti ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ SEO ma ọ bụ jiri ngwanrọ SEO / nyiwe dịnụ dị. Na agbanyeghị na ha nwere ụfọdụ myirịta, ha dị iche.
FullSEOs gụnyere otu onye ma ọ bụ otu ndị ọkachamara SEO dị ka otu anyị ebe a na Semalt. Ndị ọkachamara a na-echebara echiche ma na-eji ụzọ dị iche iche dị na peeji peeji na ihu peeji SEO iji rụọ ọrụ na weebụsaịtị gị.
Ọ bụ ezie na AutoSEOs gụnyere iji usoro ikpo okwu iji mejuputa atụmatụ SEO n'ime saịtị. O di nwute, otutu ndi oru webusaiti adighi nnakpo echiche nke SEO akpaaka.
Iji nyere gị aka ikpebi nke ka mma, anyị ga-enyocha ma SEOs ma nyochaa Pros na Cons.
FullSEO ka metụtara ọrụ na uru niile nke iji SEO. Ga -eweta okporo ụzọ organic ma na-elele ebe nrụọrụ weebụ gị. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ ihe ọ bụla onye nwe weebụ chọrọ. Ma olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-eleda uru SEO bara uru. Ọtụtụ na-eche ozugbo ha tinye ederede ole na ole, weebụsaịtị ha ga-abụ SEO kachasị. Mana nke ahụ abụghị ikpe. Ọ bụ n'ihi nke a ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị na-enwe obi abụọ banyere etu SEO zuru oke.
Hapụ ndị ọrụ zuru ezu nke SESEO na Semalt nwere ike ịbụ otu n'ime mkpebi kacha mma ị ga - eme maka weebụsaịtị gị. Dịka ndị ọkachamara, anyị na-etinye ndụ anyị na-eme nke a. Anyị na-emekwa ya n'ehi ụra anyị, yabụ enweghị onye kachasị mma na-ebuli mmeghe nke FullSEO gị. Anyị na-enyekwa gị oge ọzọ iji zụpụta echiche ọhụrụ ndị ahụ dị ịtụnanya. FullSEOs bụ ihe na-agwụ ike ma na-eri oge, mana ị gaghị enwe nchegbu banyere nke ahụ. Chee echiche banyere nkewa. Enweghị ụlọ ọrụ, azụmahịa ma ọ bụ onye bụ agwaetiti. Site na ikenye ndị ọrụ anyị otu ọrụ ahụ, ị na-enye onwe gị oge zuru oke. Oge ị ga - eji zuo ike ma topụta karịa ịrahụ ụra. Tụleekwa ọghọma gị ma ọ bụrụ na agbasie mbọ ike gị niile nke na enwetaghị afọ ojuju nke FullSEO gị.
Agbanyeghị, ebe a bụ ụfọdụ uru isi nke iji FullSEO dị ka ma ihu peeji ma ọ bụrụ na peeji SEO maka weebụsaịtị gị.
Uru nke iji FullSEO
I nwere ikike zuru ezu banyere atụmatụ SEO gị. Na FullSEO, ị na-ekwuputa ihe na-aga. You nwere ike ibugharị echiche gị, echiche gị na omume gị na ebe nrụọrụ weebụ gị ka ị na-achọ SEO gị. Gị Strategy bụ nke gị kpamkpam, nke pụtara na ọ pụọ iche.
Can nwere ike igosipụta na ejiri aka rụọ ọrụ SEO dịka atụmatụ si dị. Ilele ka atumatu gi si abuba abughi uzo di nma iji bido webusaiti. Na FullSEO, ị ga-enyocha saịtị gị ma mezie njehie na mmezu nke atụmatụ SEO gị. N'ụzọ a, ị gaghị enwe obi ụtọ maka nsonaazụ ahụ.
Site na FullSEOs, I nwere ike imezi ihu-ihu gi. Annwe wepu akwukwo di nkpa n’ebe odi nkpa. Wepụ peeji ndị bụ weebụsaịtị gị na mpụga weebụsaịtị gị. Mgbe ịdere akwụkwọ ozi ndị ọbịa na blọọgụ ọzọ ma ọ bụ hapụ okwu, nke ahụ na-ahụta ka ọ ga - adịwanye mma. FUllSEOs, nye gị ohere ka ịdebe njikọ ndị ị na-eji maka azụkọ njikọ ndị a. Nke a na - eme ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ ịntanetị ịkọ azịza gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Maka nkọwa na-akọwa usoro nlekọta anụahụ, FullSEO na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmekọrịta njikọ na weebụsaịtị gị na-ekwu maka nlekọta anụ. N'ụzọ a, ị na - agbanwe ndị na - agụ akwụkwọ na - ekwu okwu n'okporo ụzọ na ike ịbụ ndị ahịa.
Nwere ike ịhọrọ ebe ejikọtara saịtị gị. FullSEO na-enye gị ohere ịhọrọ ogo nke saịtị jikọtara ọnụ na ịdị mma nke ọdịnaya dị na njikọ azụ gị. N'ụzọ a, ị na-achịkwa onye na-ahụ ihe ma gosipụta saịtị gị n'ụdị kachasị mma.
Cons nke FullSEO
O nweghi ihe zuru oke, enwerekwa mgbada ụfọdụ iji FullSEO
Na-ewe oge: FullSEOs chọrọ oge na mgbalị siri ike n'aka ndị dere ya. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-enweghị ahụmahụ n'ọhịa. Ijikwa ọrụ nke ụlọ ọrụ SEO nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji zere nke a.
Ọ chọrọ otu raara onwe ya nye: ị ga-achọ ndị otu raara onwe ha nye nke ukwuu iwepụ FullSEO dị ịtụnanya.
Maka nnukwu weebụsaịtị, mmezu FullSEO nwere ike iwe ogologo oge.
Narị afọ nke 21 abịawo n'ọtụtụ ọganihu na teknụzụ. Mgbalị mmadụ na-ebelata nke ukwuu na njikwa na mmepụta ya na ekele ya na teknụzụ. Ma n’ezie, ndị mmadụ amamiihe na-enyere aka mepụta ya.
AutoSEO bụ akụkụ ọzọ nke ndụ anyị ebe teknụzụ enyerela ezigbo aka. SEO akpaaka bụ ojiji eji software SEO na akpaghị aka zuru oke ma ọ bụ nke na-arụ ọrụ iji mezuo atụmatụ SEO. Teknụzụ a amachila mkpa mbọ mmadụ dị.
Ndị a bụ ụfọdụ uru nke AutoSEO
Ọ dị ọnụ ala karịa karịa FullSEO. Ọ dị ọnụ ala karịa karịa FullSEO. Maka mbọ dị obere ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa mmadụ, ọ nweghị otu ìgwè SEO. Nke a wedata ụgwọ mmezi nke na - eme ka o kwe ndị na - emepụta AutoSEO ọrụ belata ọnụ ahịa ha.
Ọ na - eji aka rụọ ọrụ ndị dị egwu: n'enweghị ike ịgwụ ike, na - arịa ụbụrụ ma ọ bụ na - agwụ ike, igwe nwere ike ịnwe ọsọ ọsọ na - agbanwe agbanwe. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ijikwa ọrụ dịka audits, ịlele njikọ jikọtara ya, njupụta isiokwu, mkpado na ozi ndị ọzọ dị mkpa na weebụsaịtị n'agbanyeghị ogo ya.
Ọ dị mfe ịnweta ezigbo ọhụụ ma dekọ data na ogo isiokwu gị.
Teknụzụ a na-enye gị ike iji nyochaa asọmpi asọmpi gị, njupụta isiokwu, mkpado na data bara uru ndị ọzọ. Mgbe ahụ ị nwere ike iji ozi a, ghọta ihe nzuzo ha ma melite saịtị gị.
AutoSEO na-enye gị ohere ịhazi ọrụ SEO nke na-echekwa oge.
Enweghị mkpa ị nweta nnukwu otu SEO. Teknụzụ nwere ike ime ka sọftụwia rụọ ọrụ mmadụ iri, nke a na - echekwa ma onye na - azụ ahịa ma onye na - ere ahịa. Site na iwepu mkpa itinye ndị otu nnukwu ọrụ, obere ụlọ ọrụ na ndị na-ebido ebido na-enwe ohere ka mma iji lanarị ahịa ọjọọ.
A ka na-achọkwa igwe elekere nke mmadụ. E nwere ọtụtụ ihe mere ụmụ mmadụ ka ji arụ ọrụ kacha arụ ọrụ ma dị oke mkpa. N'agbanyeghị ụdị teknụzụ dị ọkaibe, a ka nwere ohere maka ya nke ọma.
Mgbe ejighi ya nke ọma, ngwanrọ SEO na-emepụta backlinks ọjọọ. Nke a nweziri ike ị nweta ebe nrụọrụ weebụ gị.
Imirikiti ngwanrọ SEO na-elekwasị anya na ọnụọgụ nke Keywords SEO, backlinks wdg ha anaghị akwụ ụgwọ ọrụ dị ukwuu na mma ahụ. Nke a nwere ike ịghọ nsogbu n'ikpeazụ.
Imirikiti njikọ ejikọtara na ngwanrọ SEO ma ọ bụ nyiwe siri ike iwepụta okporo ụzọ gaa na saịtị gị.
Kedu nke ị ga-eji?
Site na ịnye ọrụ abụọ ahụ, Semalt na-enye gị ohere kachasị mma iji họrọ nhọrọ kachasị dabara adaba. Onye ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ pụrụ iche, ikwesiri inweta ọgwụgwọ pụrụ iche. Nhọrọ ọ bụla ị chere kachasị mma, mee ka anyị mara, anyị ga-anapụta saịtị SEO kacha mma ị hụtụrụla. Site na ndi otu anyi na ndi ahia anyi mara nma nke dikwa oge nile, inwere ike juo ajuju obula nwere ike ju gi. Obi esiri anyị ike na anyị ghọtara ugbu a ịghọta ihe FullSEO na AutoSEO pụtara. Site na iji ihe omuma a, ị nwere ike ịhọrọ ugbu a n'etiti ọrụ Semalt FullSEO na AutoSEO yana ozi niile ịchọrọ iji hụ na ịhọrọ ọrụ SEO kachasị mma maka weebụsaịtị na azụmahịa gị. Ugbu a ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla ị chere kacha mma.